အမေဖြစ်သူက ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ သားဖြစ်သူအား တံမြတ်စည်းဖြင့် ဆိုဆုံးမရာမှ… see more – Messi Club
အမေဖြစ်သူက ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ သားဖြစ်သူအား တံမြတ်စည်းဖြင့် ဆိုဆုံးမရာမှ… see more
ဆုံးမတယ်ဆိုပေမယ့်သတိတော့ထားကျပါဗျာ။မန္တလေးမြို့.ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်.အောင်သာယာရပ်ကွက်.ဗဗ.၉/၇၉နေ ဒေါ်မအောင်ကြွယ်အား အောင်ပင်လယ်စခန်းမှူး ရဲအုပ် စိန်ထွန်း.နယ်ထိမ်းခေါင်းဆောင်ဒုရဲအုပ် ဝင်းပိုင်နှင့်အဖွဲ့တို့သွားရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ
သေဆုံးသူ၏မိခင် ဒေါ်မအောင်ကြွယ် ဇွန်လ၁၃ရက်နေက သားဖြစ်သူမောင်ထူးအောင်လင်းအား ဆုံးမနေစဉ် အတက်ရောဂါဖြစ်၍ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသပေးခဲ့ရပြီး ယမန်နေ့ ၃နာရီအချိန်တွင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသဖြင့် သေဆုံးသူ မောင်ထူးအောင်း၏ အလောင်းအားရဲဆေးစာဖြင့်
မန္တလေး ဆေးရုံကြီးသို့လပို့အပ်ခဲ့ရာPR16ဖြင့်လက်ခံစစ်ဆေးပြီး မောင်ထူးအောင်လင်းသေဆုံးမှုနှင့်ပက်သက်၍ ဓမ္မတာ အတိုင်းဟုတ် မဟုတ် သိရှိနိုင်ရန် သေမှုသေခင်းဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ သေဆုံးသူ မောင်ထူးအောင်လင်း၏ ဦးခေါင်းအား တံမြတ်စည်းဝါးလက်ကိုင်ရိုးနှင့် ရိုက်နှက်ဆိုဆုံးမခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်
တရားလိုတို့အဖွဲ့သည် မန္တလေး မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့သွားရောက်ပြီး ဒေါက်တာ ယမင်းချို .ဒေါက်တာဘုန်းလျှံ. ဒေါက်တာ ဝင်းလွင်အောင်တို့မှသေဆုံးသူ၏အလောင်းအား ရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာ တရားလိုများလိုက်ပါကြည့် ရှုခဲ့ရပြီး သေဆုံးသူ၏ ဦးခေါင်း၌ရရှိသော
ဒဏ်ရာကြောင့်ဦးနှောက်အမှေးပါးအပေါ်၌သွေးခဲခြင်း.အမှေးပါးအောက်၌သွေးယိုခြင်းတို့ကြောင့်သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသဖြင့် လူ၏အသက်အား ဥေည်အထိ ဒဏ်ရာရရှိအောင် ရိုက်နှက်ခဲ့သူ ဒေါ်မအောင်ကြွယ်. ၄၄နှစ်.
ဦးသောင်းတင်၏သမီးဖြစ်သူ၉/မရမနိုင်၀၈၁၉၆၁ကိုင်ဆောင်သူအား အောင်ပင်လယ်စခန်းမှူး ရဲအုပ်စိန်ထွန်းဦးမှ ည ၇နာရီအချိန်တွင် ပ.၃၉၂ ရာဇသကိကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်
Pan Tu ရဲရင့် ထွန်း
အမဖွေဈသူက ပွောစကားနားမထောငျတဲ့ သားဖွဈသူအား တံမွတျစညျးဖွငျ့ ဆိုဆုံးမရာမှ… see more
ဆုံးမတယျဆိုပမေယျ့သတိတော့ထားကပြါဗြာ။မန်တလေးမွို့.ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ.အောငျသာယာရပျကှကျ.ဗဗ.၉/၇၉နေ ဒျေါမအောငျကွှယျအား အောငျပငျလယျစခနျးမှူး ရဲအုပျ စိနျထှနျး.နယျထိမျးခေါငျးဆောငျဒုရဲအုပျ ဝငျးပိုငျနှငျ့အဖှဲ့တို့သှားရောကျစဈဆေးမေးမွနျးခဲ့ရာ
သဆေုံးသူ၏မိခငျ ဒျေါမအောငျကွှယျ ဇှနျလ၁၃ရကျနကေ သားဖွဈသူမောငျထူးအောငျလငျးအား ဆုံးမနစေဉျ အတကျရောဂါဖွဈ၍ ဆေးခနျးသို့ သှားရောကျကုသပေးခဲ့ရပွီး ယမနျနေ့ ၃နာရီအခြိနျတှငျသဆေုံးခဲ့ကွောငျး စဈဆေးသိရှိရသဖွငျ့ သဆေုံးသူ မောငျထူးအောငျး၏ အလောငျးအား ရဲဆေးစာဖွငျ့
မန်တလေး ဆေးရုံကွီးသို့လပို့အပျခဲ့ရာPR16ဖွငျ့လကျခံစဈဆေးပွီး မောငျထူးအောငျလငျးသဆေုံးမှုနှငျ့ပကျသကျ၍ ဓမ်မတာ အတိုငျးဟုတျ မဟုတျ သိရှိနိုငျရနျ သမှေုသခေငျးဖှငျ့ဆောငျရှကျခဲ့ရာ သဆေုံးသူ မောငျထူးအောငျလငျး၏ ဦးခေါငျးအား တံမွတျစညျးဝါးလကျကိုငျရိုးနှငျ့ ရိုကျနှကျဆိုဆုံးမခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါသညျ
တရားလိုတို့အဖှဲ့သညျ မန်တလေး မွို့ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးသို့သှားရောကျပွီး ဒေါကျတာ ယမငျးခြို .ဒေါကျတာဘုနျးလြှံ. ဒေါကျတာ ဝငျးလှငျအောငျတို့မှသဆေုံးသူ၏အလောငျးအား ရငျခှဲစဈဆေးခဲ့ရာ တရားလိုမြားလိုကျပါကွညျ့ ရှုခဲ့ရပွီး သဆေုံးသူ၏ ဦးခေါငျး၌ရရှိသော
ဒဏျရာကွောငျ့ ဦးနှောကျအမှေးပါးအပျေါ၌သှေးခဲခွငျး.အမှေးပါးအောကျ၌သှေးယိုခွငျးတို့ကွောငျ့သဆေုံးရခွငျးဖွဈကွောငျးသိရှိရသဖွငျ့ လူ၏အသကျအား ဥေညျအထိ ဒဏျရာရရှိအောငျ ရိုကျနှကျခဲ့သူ ဒျေါမအောငျကွှယျ.
၄၄နှဈ.ဦးသောငျးတငျ၏သမီးဖွဈသူ၉/မရမနိုငျ၀၈၁၉၆၁ကိုငျဆောငျသူအား အောငျပငျလယျစခနျးမှူး ရဲအုပျစိနျထှနျးဦးမှ ည ၇နာရီအခြိနျတှငျ ပ.၃၉၂ ရာဇသကိကွီးပုဒျမ ၃၀၂ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ
Pan Tu ရဲရငျ့ ထှနျး